Deg Deg Daawo:Ciidanka Puntland Oo Weeraray Culimada Xerta, – KHAATUMO NEWS
Deg Deg Daawo:Ciidanka Puntland Oo Weeraray Culimada Xerta,
Culima awdiinta Xerta ah ee ku dhaqan magaalada Garowe ee caasimada Puntland oo maanta qaarkood ay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay weerar kala kulmeen ciidamo ka tirsan Puntland, xubno isugu wasiiro iyo gudoomiyaal, kadib markii lagu weeraray dhul ay ku leeyihiin duleedka magaalada Garowe.
Dhulkani oo ay ugu talagaleen Culima awdiintu in ay ka dhisaan goobo lagu caabudo rabigeena sharafta badan, xurmo lagu barto diinta iyo goobo kale ayaa waxa ay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay kala kulmeen weerar isugu jira dhac iyo boob lagu hayo dhulkoodani.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni ayey sheegeen in marar kala duwan ay gaadhsiiyeen cabashooda, hasa yeeshee waxba aanan laga qaban.
Waxa ay sheegeen in kulan ay qaateen Culimadu madaxweynaha markii la doortay isla markaasna uu ka balanqaaday in xili walba ay la kulmi karaan ayna ku booqan karaan xafiiskiisa madaxtooyada, balse taas badalkeeda laga hor istaagay marar kala duwan la kulanka madaxweyne Denni.
Culimada ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in dhulka duulaan ay ku yihiin shakhsiyaad la safan madaxweyne Denni isla mar ahaan taana Saciid Denni uusan waxba ka qaban arimahooda kulana safan yahay shakhsiyaadkaasi duulaanka lagu soo qaaday Culimada Xerta.
Previous Post: Deg Deg Daawo:Ciidanka Puntland Oo Dhaawacay Nin Sheegtay Gudoomiyaha Maakhir State Ee Badhan
Next Post: Muuse Biixi Oo Aflagaadeeyay Beelaha Gabooye,